Bandhigga 2020 NAB Show: Suuq geyn Suuq geyn ah oo loogu talagalay Himilada Hal-abuurka leh | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Bandhigga 2020 NAB Show: Suuq geyn Suuq geyn ah oo loogu talagalay Himilo Hal abuur leh
Bandhigga 2020 NAB Show: Suuq geyn Suuq geyn ah oo loogu talagalay Himilo Hal abuur leh
Warshadaha podcast-ka ayaa noqon kara isgaarsiin wax ku ool ah iyo aalad suuq geyn oo loogu talagalay codka hal abuurka. Si kastaba ha noqotee, cajalado muuqaal ah ayaa qaadan kara oo keliya aragti illaa iyo hadda, waana meesha ay 2020 NAB Show caawin kara. Abriil, 2020 NAB Show wuxuu ka dhici doonaa Las Vegas, Nevada. Waxay isu keentaa hal abuurnimo asal kala duwan oo ka kala yimid daafaha dunida, ku dhowaad dhammaan jawiga dhijitaalka ah ee himilooyinku dhammaantood waxay jecel yihiin inay wadaagaan kuna ballaariyaan codka hal abuurka leh ee qalbigooda ku jira samaynta astaan ​​cajiib ah.
Maxaa Sanadka 2020-ka NAB Show?
The 2020 NAB Show waa aakhirka warbaahinta, madadaalada, iyo dhacdada tikniyoolajiyadeed. Ujeedada ka dambeysa munaasabaddan sanadlaha ah ayaa ah isku xirnaanta hal abuurka wershadaha muuqaalka / madadaalada si kor loogu qaado xirfadahooda, ay u helaan aqoon iyo xikmad, oo ay ugu xirnaadaan koronto awood leh xirfadlayaasha warshadaha. Kaliya adiga oo ka qayb galaya 2020 NAB Show hal abuurka himilo heli kara isku xirnaanta iyaga looga baahan yahay in ay aasaasiyan gacan ka geystaan ​​kobcinta magacyadooda wixii ka dambeeya bilowga cusub ee muuqaalka lagu bixiyo oo qof kasta oo ka bilowda warshadaha madadaalada iyo kacaanka dhijitaalka ah uu sii wado horumarka badan ee tikniyoolajiyada raadiyaha / podcast.
Istaraatiijiyada Suuqgeynta 2020-ka NAB Show Soo Jeediyay
Marka ay timaado suuqgeynta, waxbarashadu waa dhiirrigelin iyo isku mid aasaasi ah oo lagu caawinayo sumadda inay ka gudubto waxa abuurayaashu ugu talo galeen. Marwalba way jiri doonaan xaddiga inta hal abuurnimo yaqaan iyo inta ay suuq gayn karaan sumadooda. Sikastaba, sanadka 2020-ka NAB Show marna waa gaaban yahay fursadaha suuq geynta. Haddii hal-abuurnimo ka qayb-galaya 2020 NAB Show waa bilaw cusub ama halgan dheer, waxay ka faa iidaysan doonaan agabyada suuq geynta ee cajiibka ah ee la heli karo sida:
Seminaaro Iyo Tababar
Kuwani iyo qaabab kale oo badan oo suuq geyn ah ayaa ka caawiya hal-abuurka inay sare u qaadaan oo ay la xiriiraan kartida buuxda ee astaantooda.
Wixii raadinta hal abuurka ah si aad wax uga ogaato sida ugu waxtarka badan ee ay ula xiriiri karaan farriinta astaantooda, ka dib imaanshaha 2020 NAB Show shirarka waa bilow wanaagsan. Dhawr shirar ayaa dhacay 2020 NAB Show waxaa ka mid ah:
Shirkadda Isboortiga iyo Teknolojiyada Warfaafinta
Iskuxirka Websaydhka & Kahortagga Waxyaabaha La Is Weydiiyo
Mustaqbalka Dijitaalka ah
Shirka Hoggaanka Fulinta
NAB Idaacadda Raadiyaha Suuqa Dhexdhexaad ee Yaryar
Post | Soo saarida adduunka
Soo Noqoshada Shirarka
Kuwani waa uun qaar ka mid ah kuwa layaabka leh fursado waxbarasho u furan hal-abuurka at 2020 NAB Show.
2020 The NAB Show leeyahay keyword hadlaya mid walbaa doorkiisa ku leh warbaahinta, madadaalada iyo ciyaarta teknolojiyada. Dhamaan kuwan keyword hadlaya waa kuwo iskuxiran, oo aan xigmad badnayn. Qof kasta oo xaadira 2020-ka NAB Show waxay ka baran kartaa dhegeysiga dhageysiga khudbadaha muhiimka ah sida:
Peter Ramsey (Spiderman: Gudaha Aayadda Spider-Aayadda)
Marc Batellgia (International International)
Byron Allen (Istuudiyaha madadaalada)
Maskaxdaas weyn, oo ay weheliso dad badan oo hadlaaya ayaa ka qayb galayaal badan oo bixiya xikmad, talo, iyo aragti ku sabsan sida hal abuurnimadu ay si wax ku ool ah suuqa ugu xajmi karto oo ay ugu fidin lahayd isgaadhsiinta astaantooda.
2020 NAB Show Seminaaro Iyo Tababar
Odhaahda "ku celcelin ayaa kaamil ah" waxay u muuqan kartaa waxoogaa yar yar, laakiin waligeed ma lumin. The 2020 NAB Show waa hoyga kuwa badan oo wax ku ool ah oo wax soo saar leh barnaamijyada aqoon isweydaarsiga iyo tababarka, oo bixiya tababar qoto dheer oo loogu talagalay xirfadleyda raadinaya inay sahamiyaan oo ku habeeyaan xirfadahooda. Tani waxay muhiim u tahay hal-abuurka raadinaya inuu tijaabiyo xuduudooda xaalad dhab ah. Imaanshaha aqoon isweydaarsiyo iyo barnaamijyo tababar at 2020 ah NAB Show waxay ka caawin doontaa hal-abuurka in ay wax ka bartaan horumarka warshadaha. Barnaamijyada lasoo bandhigay waa:
Aqoon-isweydaarsiga Goobta ee Abuurka
Aqoon isweydaarsiga iyo barnaamijyada tababarka ayaa lagu qaban doonaa labadaba banaanka iyo gudaha fasalka. Waxay ka hadli doonaan qaar ka mid ah isbeddelada ugu cuslaa, teknolojiyada, iyo codsiyada ka shaqeeya hormarinta wershadaha podcast / madadaalada.
The 2020 NAB Show waxbarashada barnaamijyada waxaa hogaamiya madaxda sare ee warshadaha, kuwa wax soo saareyaasha warshadaha, iyo aragtiyahanno farsamo. Barnaamijyadani waxay ku yimaadaan qaabab badan iyo qaabab, iyagoo bixiya khibrado u gaar ah iyo xulasho badan. Adoo ka qayb galaya sanadka 2020 NAB show, hal abuurka rajooyinka abuuraya waxay si wax ku ool ah uheli karaan fursado cusub iyo fikrado cusub oo leh:
Barnaamijyada All-Badge Access
Shirka NAB Show
Aqoon isweydaarsiyo iyo Tababar
Barnaamijyada shir dheeri ah
Cod kasta oo hal abuur leh wuxuu gaari karaa meelaha sare ee lagu guuleysto ee sumadda caanka ah. Shaki kuma jiro quruxda farshaxanimada ee ka caawisa cod hal abuur leh in la soo baxo, gaar ahaan gudaha warshadaha maqalka / raadiyaha halkaas oo qof walba uu hadda leeyahay dabacsanaan xagga farsamada ah iyo xorriyad si firfircoon uu ugu wada xiriiri karo codkooda oo si wax ku ool ah ugu suuq geyn karo.
The 2020 NAB Show waa fursadda ugu habboon ee hal abuur kasta oo naftooda ugu suuq geyn kara idaacadda / warshadaha madadaalada iyada oo loo marayo barnaamijyo badan oo tababar ah, kuwa ku hadla martida, iyo shirarka lagu qabanayo waxa hubaal noqon doona munaasabada warbaahinta / madadaalada ee sanadka. Sanadkii 2020-kii NAB Show wuxuu dhici doonaa Abriil 18-22, 2020 at the Las Vegas Convention Center. Si loo diiwaangaliyo, riix halkan.
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News 2020 NAB Show 2020 NAB Show Martida Hadalka 2020 NAB Show Aqoon isweydaarsiyo Iyo Tababar Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention madadaalo xirfadlayaasha warshadaha Las Vegas Las Vegas Convention Center NAB 2020 Show Shirarka NAB16 Nevada podcast	2020-01-05
Previous: Injineer (Baafin)